Fepetra sy fepetra - Faucets ao an-dakozia, Faucets famenoana pot, Faucets fandroana | WOWOW
Home / Fepetra
Ity tranonkala ity dia tarihin'ny ekipa www.wowowfaucet.com. Mandritra ny tranokala, ny teny hoe "we", "us" ary "our" dia manondro ny ekipa www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com dia manolotra an'ity tranonkala ity, ao anatin'izany ny fampahalalana, fitaovana ary serivisy rehetra azo zahana amin'ity tranokala ity ho anao, ilay mpampiasa, miankina amin'ny fanekenao ny fepetra rehetra, ny fepetra, ny politika ary ny fanamarihana voalaza eto.
Amin'ny fitsidihana ny tranokalanay sy / na fividianana zavatra avy aminay dia miditra amin'ny "Serivisy" izahay ary manaiky ny hofehezin'ireto fe-potoana sy fepetra manaraka ireto ("TERMS AND CONDITIONS", "Terms"), ao anatin'izany ireo fepetra, fepetra ary politika fanampiny. voaresaka eto sy / na misy amin'ny alàlan'ny hyperlink. Ireo TERMS SY CONDITIONS ireo dia mihatra amin'ny mpampiasa rehetra ny tranokala, ao anatin'izany ireo mpampiasa tsy misy fetra izay mpitety, mpivarotra, mpanjifa, mpivarotra ary / na mpamatsy atiny.
Azafady mba vakio tsara ireo FENO SY FOMBA ireo alohan'ny hidirana na hampiasa ny tranonkalantsika. Amin'ny alàlan'ny fidirana na fampiasana ny faritra rehetra amin'ilay tranokala dia manaiky ianao fa voafatotra amin'ireny FITENY SY FIKAMBANANA io Raha tsy manaiky ny fepetra sy fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity ianao dia mety tsy hiditra amin'ny tranokala na hampiasa serivisy. Raha heverina ho tolotra ireto TERMS sy CONDITIONS ireto dia voafetra ihany ny fanekena amin'ireo TERMS sy CONDITIONS ireo.
Izay fampiasa na fitaovana vaovao izay ampidirina amin'ny magazay ankehitriny dia iharan'ny FENITRA SY NY FIKAMBANANA. Azonao atao ny mamerina mijery ny kinova farany an'ny TERMS sy CONDITIONS amin'ny fotoana rehetra amin'ity pejy ity. Izahay dia manan-jo hanana fanavaozana, fanovana na fanoloana ny ampahany amin'ireny TERMS SY CONDITIONS ireny amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao farany sy / na fanovana amin'ny tranokalanay. Anjaranao ny manamarina an'ity pejy ity indraindray raha misy fanovana. Ny fampiasanao na ny fidiranao amin'ny tranokala aorian'ny fandefasana ireo fanovana rehetra dia midika hoe fanekena ireo fanovana ireo.
FIZARANA 1 - FIOMPIANA FAMPISORANA
Amin'ny fanekena ireto TERMS sy CONDITIONS ireto dia azonao atao ny tsy mampiasa ny vokatray ho an'ny tanjona tsy ara-dalàna na tsy nahazoana alalana, na ianao, amin'ny fampiasana ny Serivisy, dia manitsakitsaka ny lalàna eo amin'ny faritra misy anao (ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona).
Dia aza mamindra misy kankana na virosy, na misy fehezan-dalàna ny toetra manimba.
A tapaka na ny fandikana ny misy ny fepetram dia hiafara amin'ny famaranana avy hatrany ny Services.
Fizarana 2 - FIVORIANA TANANA
Isika hitehirizany ny zo tsy fanompoana ny olona noho ny antony na oviana na oviana.
Takatrareo fa ny votoatiny (tsy ao anatin'izany ny carte de crédit vaovao), dia azo afindra unencrypted sy anjara (a) fampitana ny tambajotra isan-karazany; ary (b) ny fanovana mba hifanaraka sy zatra ny fepetra ara-teknika ny mampifandray tambajotra na ny fitaovana. Ny carte de crédit vaovao dia voaaro foana nandritra ny famindrana ny tambajotra.
Manaiky tsy miteraka, haka tahaka, kopia, mivarotra, mivarotra na manararaotra misy anjara ao amin'ny Service, fampiasana ny Fanompoana, na ny fidirana ho amin'ny Fanompoana, na misy fifandraisana ao amin'ny vohikala amin'ny alalan'ny izay ny asa fanompoana dia omena, raha tsy Maneho voasoratra fahazoan-dalana eto amintsika .
Ny sasin ampiasaina ao amin'ity fifanarahana dia hita ho tsy hanahirana ihany, ary tsy ferana, na raha tsy izany dia misy fiantraikany fepetram ireo.
FIZARANA 3 - FANAVOTANA, FANOMPOANA ARY FIKAMBANANA
Isika tsy tompon'andraikitra raha vaovao atao hita ao amin'ny tranonkala ity dia tsy marina, tanteraka na amin'izao fotoana izao. Ny fanazavana ao amin'ny toerana io dia omena ny fanazavana ankapobeny ihany, ary tsy tokony itokisana eo amin'ny, na ampiasaina ho toy ny hany fototry ny mandray fanapahan-kevitra tsy mila hevitra Kilonga, kokoa ny marina, feno kokoa na kokoa loharanom-baovao ara-potoana. Ny fianteherana amin'ny fanazavana ao amin'ny toerana io dia eo ny mety.
Ity tranonkala ity dia mety misy fanazavana ara-tantara sasany. Historical vaovao, voatery, tsy amin'izao fotoana izao, ary dia nomena noho ny Reference ihany. Isika hitehirizany ny zo hanova ny votoatin'ny toerana ity na oviana na oviana, fa tsy adidy ny vaovao farany izay vaovao eo amin'ny toerana. Manaiky ianao fa ny andraikitra hanara-maso ny fiovana amin 'ny toerana.
FIZARANA 4 - FIVAROTANA MOMBA NY FIVAVAHANA SY NY VOKA
Vidin-javatra noho ny vokatra dia mety miova tsy misy filazana.
Hitehirizany ny tsara isika na oviana na oviana mba hanova na hanapaka ny Service (na ampahany na afa-po aminy) tsy filazana na oviana na oviana.
Isika, dia tsy ho mendrika ny ho anao, na ny antoko na fahatelo-na inona na inona fanovana, fiovana Price, fampiatoana na ny fiatoana amin'ny Service.
FIZARANA 5 - PRODUKSINA NA MPANOMPOANA (raha ilaina)
Vokatra na ny tolotra sasany dia mety ho hita amin'ny aterineto irery ihany amin'ny alalan'ny tranonkala. Ireo vokatra na ny tolotra dia mety tsy voafetra ny be sy ny foto-kevitra ny hiverina na fifanakalozana ihany araka ny Return Policy.
Nanao ny ezaka rehetra izahay mba hanehoana araka izay azo atao ny loko sy ny sarin'ny vokarintsika izay miseho ao amin'ny fivarotana. Tsy afaka manome toky izahay fa marina ny fampisehoan'ny solosainao ny loko rehetra.
Hitehirizany ny tsara isika, nefa tsy voatery, mba hamerana ny fivarotana ny vokatra na ny tolotra ho misy olona, ​​faritra jeografika na fahefana. Mety mampihatra izany zo eo amin'ny raharaha-by-raharaha fototra. Isika hitehirizany ny zo mametra ny be ny misy vokatra na ny tolotra izay atolotsika. Filazalazana rehetra ny vokatra na ny vokatra Pricing dia mety miova amin'ny fotoana rehetra tsy filazana amin'ny fisainana mazava ny hany amintsika. Isika hitehirizany ny zo hijanonako vokatra misy na oviana na oviana. Ny tolotra tena mba vokatra na ny asa fanompoana atao ao amin'ny toerana ity Tsy ampy saina izay voarara.
Tsy mitaky fa ny toetra na vokatra, tolotra, fanazavana, na ara-nofo hafa novidina na azo avy no hihaona ny fanantenanao, na izay misy fahadisoana ao amin'ny Service no ahitsy.
FIZARANA 6 - FAMPISEHOANA NY FOTOTRA SY FIKAMBANANA
Isika hitehirizany ny zo tsy misy toerana mba miaraka aminay ianao. Mety, eo amin'ny hany fisainana mazava, mametra ny na manafoana novidina be isan-olona, ​​isan-tokantrano, na isaky ny filaminana. Ireo fepetra napetraka dia mety ahitana baiko avy, na ambanin'ny mpanjifa ihany tantara, mitovy ny carte de crédit, ary / na nandidy izay mampiasa mitovy billing sy / na ny fandefasana ny adiresy. Ao ny zava-nitranga fa manao fanovana na hanafoana ny didy, dia mety manandrana mba hampahafantatra anao amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny e-mail, ary / na ny billing adiresy / finday maro tamin 'ny fotoana omena ny baiko nataony izy. Isika hitehirizany ny zo hametra na mandrara baiko izay, eo amin'ny hany fitsarana, toa hapetraka ny mpivarotra, resellers na mpizara.
Manaiky ny hanome amin'izao fotoana izao, feno sy araka ny marina fividianana sy tantara vaovao ho an'ny fividianana rehetra atao amin'ny ny fivarotana. Ianao Manaiky ny vaovao farany avy hatrany ny kaonty sy ny vaovao hafa, anisan'izany ny adiresy mailaka sy ny carte de crédit isa sy lany daty, ka dia afaka hamita ny varotra, ary mifandray anao raha ilaina.
Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, avereno jerena ny politikam-piverenanay.
Fizarana 7 - TOOLANA FOTOTRA
Mety hanome anareo amin'ny fidirana amin'ny antoko fahatelo-fitaovana mahery izay sady tsy hanara-maso tsy manana fanaraha-maso na torohevitra.
Ianao manaiky sy miaiky fa isika dia manome fahafahana hahazo izany fitaovana "tsy izay", ary "toy ny misy" tsy misy fiantohana, fanehoana na ny toe-javatra na inona na inona, ary tsy misy fanamafisana. Isika dia tsy madio na inona na inona hitsangana avy na momba ny fampiasana tsy voatery X-antoko fitaovana.
Izay mety ho fampiasana ny anao ny fitaovana tsy voatery nanatitra ny alalan 'ny toerana dia tanteraka eo ny mety sy ny fisainana mazava, ary tokony azo antoka fa efa zatra sy mankasitraka ny ny teny izay fitaovana no omen'ny mifanaraka-antoko fahatelo mpamatsy (s).
Azontsika atao ihany koa, amin'ny ho avy, ny manolotra serivisy sy / na fiasa vaovao amin'ny alàlan'ny tranokala (ao anatin'izany ny famoahana fitaovana sy loharano vaovao). Ireo fiasa sy / na serivisy vaovao toy izany dia iharan'ny TERMS sy CONDITIONS ihany koa.
FIZARANA 8 - ROTOTRA FIVORIANA FAHATELO
Sasany votoaty, vokatra sy ny tolotra misy amin'ny alalan'ny Service dia mety ahitana ny fitaovana avy amin'ny fahatelo-antoko.
Open antoko rohy amin'ny tranonkala ity dia mety hitarika anao antoko fahatelo-tranonkala izay tsy mpikamban 'aminay. Isika tsy tompon'andraikitra amin'ny mandinika na fanombanana ny afa-po na ny marina ary tsy mitaky ary tsy misy madio na andraikitra na inona na inona antoko fahatelo-fitaovana, na vohikala, na ho an'ny hafa fitaovana, vokatra, na ny tolotra ny fahatelo-antoko.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana na fahasimbana mifandraika amin'ny fividianana na fampiasana entana, serivisy, loharano, atiny, na fifanakalozana hafa natao izahay mifandraika amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Azafady mba avereno jerena tsara ny politikan'ny antoko fahatelo sy ny fomba fanao ary alao antoka fa azonao tsara izany alohan'ny hidiranao amin'ny raharaham-barotra rehetra. Ny fitarainana, ny fitakiana, ny ahiahy, na ny fanontaniana momba ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo dia tokony hapetraka any amin'ny antoko fahatelo.
FIZARANA 9 - FOMBA FAMPISEHOANA, FIVAROTANA SY FANOMPOANA HAFA
Raha, amin'ny fangatahanay dia mandefa fangatahana manokana ianao (ohatra ny fifaninanana fifaninanana) na raha tsy misy fangatahana avy aminay dia mandefa hevitra mamorona, soso-kevitra, tolo-kevitra, drafitra, na fitaovana hafa ianao, na amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny mailaka, mailaka, na raha tsy izany. (mitambatra, 'soso-kevitra'), manaiky ianao fa, amin'ny fotoana rehetra, tsy misy famerana, fanitsiana, dika, famoahana, fitsinjarana, handika ary hampiasana amin'ny fomba hafa ny hevitra omenao anay. Aty ary tsy misy fepetra tsy tokony hatao (1) hitazomana ny fanehoan-kevitra amin'ny fahatokisana; (2) handoa tambiny amin'ny fanehoan-kevitra; na (3) mamaly ny fanehoan-kevitra.
Mety, kanefa tsy manana adidy isika, manara-maso, manitsy na manaisotra atiny izay heverinay fa manana ny hevitray ihany fa tsy ara-dalàna, manafintohina, mandrahona, manala baraka, manala baraka, mamoafady, vetaveta na manohitra izany na manitsakitsaka ny fananana ara-panahin'ny antoko na FITSIPIANA SY FIKAMBANANA .
Manaiky ianao fa ny soso-kevitrao dia tsy mandika misy zo na fahatelo-antoko, anisan'izany ny zon'ny mpamorona, famantarana, fiainana manokana, toetra na ny hafa, na format manan-tompo zo manokana. Ianao koa manaiky fa ny soso-kevitrao dia tsy ahitana manala baraka, na raha tsy izany dia tsy ara-dalàna, ara-nofo ratsy na vetaveta, na misy na solosaina virosy na malware hafa izay mety amin'ny fomba rehetra misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny amin'ny Service na mifandray tranonkala. Mety tsy hampiasa ny diso e-mail, mody ho olona iray hafa noho ny tenanao, na raha tsy izany dia hamitaka antsika na fahatelo-antoko raha ny amin'ny niandohan'ny na fanehoan-kevitra. Ianao no tompon'andraikitra fotsiny ho an'ireo fanehoan-kevitra ianao sy ny marina. Izahay tsy handray andraikitra sy ny tsy mihevitra na inona na inona madio fanehoan-kevitra navoakan'i ianao na fahatelo-antoko.
FIZARANA 10 - FIVORIANA AZONAO
Ny fandefasana ny mombamomba anao manokana amin'ny alalan'ny fivarotana dia tarihin'ny politikantsika tsy miankina.
Fizarana 11 - TOROHORO, FIVORIANA SY FANOMPOANA
Indraindray dia mety ho fanazavana eo amin'ny toerana, na ao amin'ny Service izay misy typographical fahadisoana, inaccuracies na fanadinoana izay mety mifandray amin'ny vokatra famaritana, Pricing, fisondrotana, tolotra, vokatra fandefasana entana fiampangana, fitaterana sy ny fisian'ny fotoana. Isika hitehirizany ny zo hanitsy izay diso, inaccuracies na fanadinoana, ka hanova na vaovao farany vaovao, na hanafoana ny baiko raha misy vaovao ao amin'ny Service na ao amin'ny mifandray tranonkala dia diso na oviana na oviana tsy mialoha filazana (anisan'izany rehefa efa nanaiky ny filaminana) .
Miezaka tsy adidy ny vaovao farany: Ataovy tsara na hanazavana vaovao ao amin'ny Service na ao amin'ny mifandray tranonkala, anisan'izany ny tsy misy fetra, Pricing vaovao, raha tsy araka ny takian'ny lalàna. Tsy misy voafaritra fanavaozam-baovao na hampaherezana daty ampiharina ao amin'ny Service na ao amin'ny tranonkala mifandray, dia tokony ho raisina ho milaza fa vaovao rehetra ao amin'ny Service na ao amin'ny tranonkala mifandray efa farany na havaozina.
FIZARANA 12 - EO ANAO NY MPITONDRANA
Ho fanampin'ny fandrarana hafa izay voalaza ao amin'ny FANONTANIANA SY NY FIKAMBANANA, dia voarara tsy hampiasa ny tranokala na ny atiny ianao: (a) ho an'ny tanjona tsy ara-dalàna; b) mangataka amin'ny hafa hanao na handray anjara amin'ny hetsika tsy ara-dalàna; (c) manitsakitsaka ny lalàna, lalàna, lalàna na ôrdônansy eo an-toerana na iraisam-pirenena na UK; d) manitsakitsaka na manitsakitsaka ny zon'ny fananantsika ara-tsaina na ny zon'ny fananana ara-tsaina an'ny hafa; e) manenjika, manararaotra, manompa, manimba, manala baraka, manendrikendrika, manala baraka, mampitahotra, na manavakavaka mifototra amin'ny miralenta, fironana ara-nofo, fivavahana, foko, firazanana, taona, fiaviana, na sembana; (f) mandefa fampahalalana diso na diso; (g) mampakatra na mamindra viriosy na karazan-kaody maloto hafa mety hampiasaina amin'ny fomba rehetra izay hisy fiatraikany amin'ny fiasan'ny Serivisy na amin'ny tranokala misy ifandraisany, tranokala hafa, na Internet; (h) manangona na manara-maso ny mombamomba ny hafa; (i) manaparitaka spam, phish, pharm, pretext, spider, mandady na manala; j) ho an'ny tanjona vetaveta na fahalotoam-pitondrantena rehetra; na (k) hanelingelina na hanodinkodinana ireo fiasa fiarovana amin'ny serivisy na tranokala mifandraika amin'izany, tranokala hafa, na Internet. Izahay dia manan-jo hamarana ny fampiasanao ny Serivisy na tranokala mifandraika amin'izany amin'ny fandikana ny fampiasana voarara.
FIZARANA 13 - FIVORIANA NY FIVORIANA; FIVORIANA FAHASANA
Tsy manome antoka, misolo tena na didy fampisamborana fa ny fampiasana ny fanompoana, dia ho tsy tapaka, ara-potoana, tsy manana ahiahy na diso-maimaim-poana.
Tsy mitaky fa ny vokatra izay mety ho azo avy amin'ny fampiasana ny fanompoana dia ho marina na azo itokisana.
Ianao manaiky fa indraindray isika dia mety hanala ny fanompoana ho an'ny fe-potoana tsy voafetra na manafoana ny asa fanompoana na oviana na oviana, tsy misy filazana ho anao.
Manaiky ianao fa ny fampiasana anao, na ny tsy fahaizanao ampiasaina, dia atahorana irery ny serivisy. Ny serivisy sy ny vokatra sy ny serivisy rehetra atolotra anao amin'ny serivisy dia (afa-tsy izay nambara taminay mazava tsara) izay natolotra hoe 'as is' ary 'azo ampiasaina' ho an'ny fampiasana anao, tsy misy fisoloan-kevitra, warranty na fepetra misy azy, na aseho na tafiditra ao anatin'izany, anisan'izany ny antoka rehetra na ny toe-piainana entin'ny mpivarotra, ny kalitaon'ny varotra, ny fahasalamana ho an'ny tanjona iray, ny faharetana, ny anaram-boninahitra ary ny tsy fanitsakitsahana.
Na ahoana na ahoana, ny tompon-tsika, ny mpiandraikitra, ny mpiasa, ny mpiara-miasa, ny mpandraharaha, ny mpiantoka, ny interns, ny mpamatsy, ny mpanome tolotra na ny licensors dia tompon'andraikitra amin'ny mety ho lozam-pifamoivoizana, fatiantoka, fitakiana, na manokana, indirect, Ny vokatra azo avy amin'ny karazana rehetra, anisan'izany, tsy misy fameperana ny tombotsoa very, ny vola miditra, ny tahiry very, ny fahaverezana ny angon-drakitra, ny fandoavam-bola, na ny fahavoazana mitovy amin'izany, na ny mifototra amin'ny fifanarahana, ny fanararaotana (anisan'izany ny fahamendrehana) ny fampiasana ny iray amin'ny serivisy na ny vokatra azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny serivisy, na amin'ny fitarainana hafa mifandraika amin'ny fomba fampiasanao ny serivisy na vokatra rehetra, ka ao anatin'izany, fa tsy voafetra ny fahadisoana na fanesorana amin'ny votoatiny, na Ny fatiantoka na ny fahavoazana rehetra vokatry ny fampiasana ny serivisy na zavatra (na vokatra) navoaka, na navoaka, na nampahafantarina azy tamin'ny alàlan'ny serivisy, na dia nanoro hevitra momba ny mety ho azy aza izy ireo. Satria ny fanjakana sasany na ny juridictions dia tsy mamela ny fanilihana na ny famerana ny andraikitry ny voka-dratsy enti-manohitra na manimba, any amin'ny fanjakana toy izany na eo amin'ny sehatra toy izany, dia voafetra amin'ny fepetra faran'izay betsaka avelan'ny lalàna.
FIZARANA 14 - FIVORIANA
Manaiky ianao handoa onitra, hiaro ary hitazona tsy maninona anay sy ny ray aman-dreninay, ny sampana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-miasa, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpandraharaha, ny mpifaninana, ny mpanome alalana, ny mpanome tolotra, ny mpandray anjara, ny mpamatsy, ny mpampiofana ary ny mpiasa, tsy misy atahorana na inona na inona fangatahana na fangatahana, anisan'izany ny antonony. ny saran'ny mpisolovava, ataon'ny ankolafy fahatelo na noho ny fanitsakitsahana ireo TERMS SY CONDITIONS na ireo antontan-taratasy ampidirin'izy ireo amin'ny alàlan'ny referansa, na ny fandikana lalàna na zon'ny antoko fahatelo.
FIZARANA 15 - FIVORIANA
Raha toa ka misy fepetra arahana amin'ireto TERMS SY CONDITIONS ireto ka tapa-kevitra ny tsy ho ara-dalàna, tsy misy na tsy azo ampiharina, dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fepetra rehetra avelan'ny lalàna mihatra izany fepetra izany, ary ny ampahany tsy azo ampiharina dia heverina fa nesorina tamin'ireo TERMS ireo CONDITIONS, ny fanapahan-kevitra toy izany dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fahamendrehana sy ny fampiharana ny fepetra sisa tavela.
Fizarana 16 - FIKORORANA
Ny andraikitra sy ny lafy ratsiny ny antoko nanameloka mialoha ny daty famaranana dia tafavoaka velona ny fanalan-fifanarahana ity ho an'ny tanjona rehetra.
Ireo TERMS sy CONDITIONS ireo dia mandaitra raha tsy ary mandra-pikatona anao sy ianao. Azonao atao ny mamarana ireo TERMS SY CONDITIONS ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny fampandrenesana anay fa tsy maniry hampiasa ny serivisinay intsony ianao, na rehefa mitsahatra tsy mampiasa ny tranokalanay ianao.
Raha amin'ny fanapahan-kevitray irery dia tsy nahomby ianao, na miahiahy izahay fa tsy nahomby, mba hanaraka ny fe-potoam-piasana na fepetra voalaza ao anatin'ireny FITSIPIKA SY FOMBA AZAFANA ireny, dia azonay atao ihany koa ny manafoana ity fifanarahana ity amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana ary ho tompon'andraikitra amin'ny vola rehetra tokony aloa hatramin'ny sy ny datin'ny famaranana; ary / na mifanaraka amin'izany dia mety handà ny fahazoanao miditra amin'ny serivisinay (na ny ampahany aminy).
Fizarana 17 - FIVORIANA ENTANA
Ny tsy fahombiazantsika mampiasa na mampihatra izay zon'ny na fepetra voalaza ao amin'ireny TERMS SY CONDITIONS ireny dia tsy midika hoe fanilihana izany zo na famatsiana izany.
Ireto TERMS SY CONDITIONS ireto ary ny politika na ny lalàna mifehy izay navoakanay tamin'ity tranokala ity na momba ny The Service dia ny fifanarahana sy ny fahazoan-kevitra rehetra eo aminao sy izahay ary mifehy ny fampiasanao ny serivisy, eo alohan'ny fifanarahana, fifandraisana ary tolo-kevitra teo aloha na taloha. , na am-bava na an-tsoratra, eo aminao sy aminay (ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny, ny kinova farany amin'ny TERMS sy CONDITIONS).
Ny fanjavozavoana amin'ny fandikana ireo TERMS sy CONDITIONS ireo dia tsy azo adika hanohitra ny antoko mpandrafitra.
FIZARANA 18 - LALANA MANOLANA
Ireto TERMS SY CONDITIONS ary ireo fifanarahana samihafa izay manome anao ny Serivisy dia hofehezina sy hadika mifanaraka amin'ny lalàn'i UK.
FIZARANA 19 - NY FANovana amin'ny fepetra sy ny toe-javatra
Azonao atao ny mandinika ny kinovan'ny TERMS sy CONDITIONS farany indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ity pejy ity.
Izahay dia mitahiry ny zony, amin'ny fahefanay irery, hanavao, hanova na hisolo izay ampahany amin'ireny FITSIPIKA SY FOMBA izany amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao farany sy fanovana ao amin'ny tranonkalantsika. Anjaranao ny mijery ny tranokalanay indraindray raha misy fanovana. Ny fampiasanao na ny fidiranao amin'ny tranokalanay na ny serivisy aorian'ny fandefasana ny fanovana ireo TERMS sy CONDITIONS ireo dia fanekena ireo fanovana ireo.